आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइल प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ ? सावधान ! - विवेचना
आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइल प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ ? सावधान !
April 25, 2018 469 Views
काठमाडौं, वैशाख १२ । के तपाईले आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइलको अधिक प्रयोग गर्ने अवसर दिनुभएको छ ?
विशेषज्ञ पौडेलले भने, ‘गर्मी मौसम पनि शुरु भइसकेकाले आँखाका बिरामी विशेष गरी सतर्क हुनुपर्छ । यो समयमा स–साना बालबालिकालाई आँखा रातो हुने तथा आँखा पाक्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’
आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग भएकाले हरेक व्यक्तिले कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक आँखाको जाँच गराउनुपर्छ र सन्तुलित भोजन विशेष गरी सागपात बढी सेवन गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन् ।
अर्को कारण हो माइनस १५ देखि माइनस २० पावरको चस्मा लगाउने व्यक्तिमा पनि आँखाको पर्दा च्यातिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उनका अनुसार माइनस १० पावरको चस्मा लगाउने आँखा रोगीले समय समयमा जाँच गरेर आँखाको ख्याल राख्नुपर्छ ।
केन्द्रमा आँखा जँचाउन आउनुभएका रामेछापका सुरेश घिमिरेले आँखाको ज्योति नै आफ्नो सम्पत्ति भएकाले हरेक वर्ष आफैँले आँखा जाँच गराउँदै आएको बताए ।
कामको सिलसिलामा कम्प्युटर, ल्यापटप तथा मोबाइलको प्रयोगले आँखा अलि कति कमजोर भएको अनुभूति आफूलाई लागेको उनले बताए ।
Previous अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी
Next नाबालिग बलात्कारमा आसारामलाई आजीवन कैद सजाय
Pingback: proper dryer vent installation